မင်းသိင်္ခ ေဗဒင်-Min Thein Kha Safe APK Download by Bagan Innovation Technology - dubAPK
မင်းသိင်္ခ ေဗဒင်-Min Thein Kha
By Bagan Innovation Technology
Bagan Innovation Technology မင်းသိင်္ခ ေဗဒင်-Min Thein Kha
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏တပည့်အရင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မှ ဝါရင့်ဗေဒင်ဆရာ ၊ ဆရာမ များမှဟောပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Application မှမေးခွန်းများမေးမြန်းပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း ဗေဒင် အ ဖြေအသံဖိုင် ကို ဆရာ၊ဆရာမ များမှ ဗေဒင်မေးမြန်းသူထံသို့ပေးပို့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင်တွင် ဗေဒင်မေးမြန်းပြီး ၄၈ နာရီအတွင်းတွင် မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် App ၏ "ဗေဒင်အဖြေကြည့်ရန်" တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် application တွင် ဆရာ၊ဆရာမ များနှင့် Video Call ဖြင့်ဗေဒင်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ပါဝင်သော ဗေဒင်ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ဗေဒင်ပညာ အတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် နှစ် အလိုက် ဟောစာတမ်း၊ အပတ်စဉ်ဟောစာတမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဟောစာတမ်းတစ်ခုချင်းစီတွင် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ နှင့် ပြုလုပ်ရန် ယတြာများ ပါဝင်ပါသည်။မင်းသိင်္ခဗေဒင် App ဖြင့် မိမိကံကြမ္မာကိုသာမက မိမိ၏ မိသားစုဝင် ၊သူငယ်ချင်း ၊မိတ်ဆွေများ အ တွက်လဲ မေးမြန်းနိုင်ပြီး Facebook မှတစ်ဆင့်ပြန်လည် Share ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။မင်းသိင်္ခဗေဒင်Application ၏ အမည်သုံးစွဲခွင့်၊ပုံသုံးစွဲခွင့်၊ဟောစာတမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များ ရယူလုပ်ကိုင်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ပါဝင်သော ဗေဒင်ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ဗေဒင်ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application တွင် ၇ ရက် သားသမီးများအတွက် နှစ်အလိုက် ဟောစာတမ်း၊ အပတ်စဉ်ဟောစာတမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဟောစာတမ်းတစ်ခုချင်းစီတွင် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ နှင့် ပြုလုပ်ရန် ယတြာများ ပါဝင်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် App ဖြင့် မိမိကံကြမ္မာကိုသာမက မိမိ၏ မိသားစုဝင် ၊ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေများအတွက်လဲ မေးမြန်းနိုင်ပြီး Facebook မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် Share ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် Application ၏ အမည်သုံးစွဲခွင့်၊ ပုံသုံးစွဲခွင့်၊ ဟောစာတမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များရယူလုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
The astrology answers will be received by Customers within 48 hours after the question is asked.
Min Thein Kha Astrology Application has experienced astrologers from Yangon and Mandalay are giving the future prediction . This isaservice where astrologers send the astrology answer audio file to the customer within 48 hours after asking questions from the application.
As another service, you can ask astrology by video call with the experienced astrologers in Min Thein Kha Astrology application.
The future prediction algorithms used in Min Thein Kha BayDin Application are based on the principle of Sayargyi Min Thein Kha. Min Thein Kha BayDin Application has featured Yearly prediction papers, Weekly prediction papers. Each prediction papers includes the topics of economy, health, social, marriage, education predictions, things to do and don’t, and advice to avoid unfortunate events. You can use Min Thein Kha BayDin app to find predictions for your family, your friends and colleagues and share on Facebook. The information and data contained on this app are provided by Daw Than Nu Aung, who own Intellectual Property and is authorized person to allow us to use Sayargyi “Min Thein Kha” name, image, prediction papers and theories used in our app.
From version မင်းသိင်္ခ ေဗဒင်-Min Thein Kha 5.7.4:
မင်းသိင်္ခ ေဗဒင်-Min Thein Kha - version 5.7.4
Uploaded:February 24, 2022
Myanmar cinematic movies and videos Application
Htwet Toe lets you to connect with agronomists to answer your farm problems.
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ်စင်တွင် မြန်မာအသံသွင်း စာအုပ်များကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
Shwe Note: 30 min book summary
မြန်မာဘာသာပြန် အနှစ်ချုပ် စာအုပ်ကောင်းများ
MmYearX (from 1910 to 2030+)
Starts from 1910. Always updated with latest official holidays.
Mum & Baby eCommerce Platform for Myanmar Parents
This isacalendar for the year 1900-2025.
A collection of songs and poems of the Dhamma School Foundation
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ တရားတော် mp3 အသံဖိုင်များ
Burmese Translation Of Tipitaka Pali
Three type the most, elected Liuren
Outstanding Commentary (dream interpretation), over 8500 interpretations, 58 chapters,3systematic search
Singapore Eye is the most influential Chinese self-media in Singapore, providing services such as Singapore news, life quiz, rental, housing sales, recruitment, food and entertainment, education and training, housekeeping, business finance, dating, second-hand trading, online and offline activities.
Professional divination software using Meihuayishu and Liu Yao principle
Liu Yao principle use Meihuayishu and professional divination software
Enjoyaunique shopping experience at MOE
大字版六合彩 - 即時開彩(Live!) Mark Six
一個為老人，長者，低視能用戶而設的應用程式,提供 即時開獎 六合彩(Mark Six)攪珠結果,可以即時知道結果,與電視同步,有如攪珠現場(Live).
SeerateNabavi | SerateAnbia | سیرت انبیاء
SeerateAnbiaeKiraam from Hazrat Adam (A.S) to Hazrat Muhammad (S.A.W).
Nice Dua(দু'আ) application in Bangla & English.
Seer 씨어 - 운명, 운세, 궁합, 애정, 손금, 명리
Using an ancient method, you can see your fortune with justapalm photo, and ask about your fortune, wealth, chemistry, business luck, fellowship luck, and feng shui.
নামাজ শিক্ষা নামাজের দোয়া ও সূরা ছোট সূরা অডিও সহ এই অ্যাপে দেয়া আছে ।
မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် - Min Thein Kha BayDin Application
스타일셀러! 구매도, 판매도 돈이 되는 스마트 셀링 플랫폼!
A smart selling platform where you can buy and sell money! Style sellers make your review even more valuable.